Ụdị ogo etiti na ọzụzụ aka ọrụ | Nhazi na ọmụmụ ihe
Maria José Roldan | 07/01/2022 12:21 | Ọzụzụ
Obi abụọ adịghị ya na ịhọrọ ezigbo ọrụ kwa ụbọchị bụ ihe mgbagwoju anya ma sie ike karị. Enwere ọtụtụ ndị na-ekpebi ịzụ na ịgbasa usoro ọmụmụ ha, na-amụ akara ugo mmụta mahadum ụfọdụ. Ụzọ ọzọ ị ga-esi zụọ ma nwee ike itinye akwụkwọ maka ọrụ bụ site na Ọzụzụ Akaụntụ.
Ogo dị iche iche dị na VET dị ezigbo mma ma a bịa n'itinye akwụkwọ maka ọkwa n'ahịa ọrụ sara mbara. N'isiokwu na-esonụ, anyị ga-ekwu maka ọkwa dị iche iche nke etiti ị nwere ike ịhụ na FP na otu esi enweta ha.
1 Gịnị bụ ọkara ogo?
2 Kedu ihe ọ na-ewe iji gụchaa akara ugo mmụta etiti na ọzụzụ aka ọrụ?
3 Klas nke etiti
Gịnị bụ ọkara ogo?
Enwere ike itinye akara ugo mmụta etiti n'ihe a maara dị ka Ọzụzụ Akaụntụ. Emebere ụdị FP a ka ụmụ akwụkwọ wee nwee ike ịzụ ọzụzụ n'otu mpaghara wee nweta ụwa ọrụ ngwa ngwa. Ewezuga akara ule etiti, enwere akara ugo mmụta dị elu na ọzụzụ nkuzi bụ isi. Akara ule etiti abụghị ihe ọzọ karịa ọmụmụ ọkachamara, nke ụmụ akwụkwọ na-atụ anya ya ka ị nwee ike ịzụlite otu ọrụ ma ọ bụ ọrụ nke ọma.
N'ihe banyere akara ule etiti, ọzụzụ ahụ na-adịru afọ abụọ. N'ọkwa ndị a, ụmụ akwụkwọ na-enweta ọzụzụ nkuzi na nke bara uru. Ihe kacha mma gbasara ogo etiti na VET bụ na akụkụ bara uru na-ebute ụzọ karịa usoro iwu. Nke a bụ ihe dị mkpa mgbe ụmụ akwụkwọ na-ahapụ nke ọma maka ụwa nke ọrụ.
Kedu ihe ọ na-ewe iji gụchaa akara ugo mmụta etiti na ọzụzụ aka ọrụ?
Onye ahụ chọrọ ịme akara ugo mmụta VET, ga-emezurịrị usoro ihe achọrọ:
Nwee akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ ma ọ bụ akara mmụta dị elu.
Nwee aha nke Isi FP.
Nwee akara ugo mmụta teknụzụ o Ọkachamara enyemaka.
Ọ bụrụ na onye ahụ enweghị ụdị nzere agụmakwụkwọ ọ bụla, ha nwere ike nweta ogo ogo nke isiokwu ọ chọrọ site na ihe ndị a:
Gafere usoro ọzụzụ a kapịrị ọnụ.
Gafere ule mbata na okirikiri ọzụzụ etiti.
Gafere ule mbata nke mahadum maka ndị mmadụ karịrị afọ 25.
Klas nke etiti
Ọ bụrụ n’ikpebie ịhọrọ ogo ogo FP ị kwesịrị ịma na e nwere nnukwu ihe ọmụmụ na ọmụmụ ihe dị iche iche. Ọmụmụ ihe kacha arụpụta na ọkwa ọrụ bụ nke ahụike, azụmahịa na ịzụ ahịa, ịchọ mma na ịkpụ ntutu, na nchịkwa na njikwa. A ga-achịkọta ọmụmụ ihe dị iche iche na ezinụlọ ndị ọkachamara. Mgbe ahụ, anyị na-egosi gị nkezi ogo dị iche iche dị na ntozu kwekọrọ:
Ihe omume anụ ahụ na egwuregwu: Ọkachamara na-eme ihe omume anụ ahụ-egwuregwu na gburugburu okike.
Nlekọta na njikwa: Ọkachamara nchịkwa nchịkwa.
Agrarian: Onye na-ahụ maka mmepụta ihe ubi; Ọkachamara na ọrụ ubi na ifuru; Ọkachamara na itinye n'ọrụ na nchekwa nke gburugburu okike.
Nkà eserese: Technician na Digital Prepress; Onye na-ahụ maka mbipụta ihe osise; Ọkachamara nrụcha akwụkwọ mgbasa ozi na eserese
Azụmahịa na ire ahịa: Ọkachamara na Ọrụ Azụmahịa; Ọkachamara na ire ngwaahịa nri.
Eletriki na eletrọnịkị: Ọkachamara na nrụnye eletriki na akpaaka; Ọkachamara na nrụnye nzikọrịta ozi.
Ike na mmiri: Ọkachamara na netwọkụ na ọdụ ọgwụgwọ mmiri.
Nrụpụta igwe: Onye na-arụ ọrụ igwe; Ọkachamara ịgbado ọkụ na esi mmiri ọkụ; Nkà na ụzụ ọla.
Ụlọ mbikọ na njem nlegharị anya: Ọkachamara Ọrụ Mweghachi; Ọkachamara kichin na gastronomy.
Foto nkeonwe: Ọkachamara na Aesthetics na Mma; Ọkachamara na nhazi ntutu na ihe ịchọ mma ntutu.
Foto na ụda: Jockey vidiyo na nka nka ụda.
Ụlọ ọrụ nri: Ọkachamara na ime achịcha, achịcha achịcha na ihe oriri; Ọka na-ahụ maka mmanụ oliv na mmanya.
Ozi na nkwukọrịta: Technician na sistemụ microcomputer na netwọkụ.
Ntinye na mmezi: Onye na-ahụ maka ọrụ na ụlọ nrụpụta okpomọkụ; Ọkachamara na nrụnye refrigeration na ikuku oyi; Ọkachamara Nlekọta Electromechanical.
Osisi, Akụrụngwa na Cork: Nrụnye na Nrụpụta Ihe; Ọkachamara nka na nka na nka.
Chemistry: Onye na-ahụ maka osisi kemịkalụ; Nkà na ụzụ na-arụ ọrụ ụlọ nyocha.
Ahụike: Ọkachamara na ụlọ ahịa ọgwụ na Parapharmacy; Ọkachamara ahụike mberede; Ọkachamara na nlekọta nọọsụ inyeaka.
Nchekwa na gburugburu: Onye na-ahụ maka nchekwa ihe mberede na obodo.
Ọrụ mmekọrịta ọha na eze na obodo: Ọkachamara nlebara anya nye ndị mmadụ nọ n'ọnọdụ ndabere.
Akwa, akwa na akpụkpọ anụ: Ọkachamara ejiji na ejiji.
Ụgbọ njem na nlekọta ụgbọ ala: Ọkachamara ahụ; Ọkachamara na Electromechanics nke ụgbọ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nhazi na ọmụmụ ihe » Noticias » Ọzụzụ » Ụdị ogo etiti na Ọzụzụ Akaụntụ